Zava-bavaka 30 Toeram-pivarotana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Zava-bavaka 30 ho an'ny fitomboana amin'ny raharaham-barotra
Zava-bavaka 30 ho an'ny fitomboana amin'ny raharaham-barotra
Jenezy 26:12 Dia namafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo zato heny tamin'io taona io; ary notahin'i Jehovah izy. 26:13 Ary nihalehibe ralehilahy ka nandroso sy nitombo ambara-pahatongany ho lehibe; 26:14 fa nanana ondry aman'osy sy omby ary andevo maro izy; dia nialona azy ny Filistina.
fahombiazana ary fitomboana dia fanirian'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra. Ao amin'ny bokin'ny 3 Jaona 1: 2, dia nazava mazava Andriamanitra fa ny faniriany lehibe indrindra dia ny hahitantsika fahombiazana amin'ny lafiny rehetra. Ny hahomby dia midika hoe fivoarana ary mitombo dia midika hoe fivoarana. Androany isika dia handray anjara amin'ny vavaka 30 ho an'ny fitomboana eo amin'ny fandraharahana. Ireo teboka entim-bavaka ity dia hanome hery anao amin'ny fahendren'Andriamanitra rehefa miasa amin'ny fitomboana sy ny fanohizana ny orinasanao ianao. Ny asa aman-draharaha rehetra dia afaka mitombo, raha mbola mampiasa azy amin'ny fahendren'Andriamanitra ianao. Ny fivavahako ho anao anio dia izao, ny fanahin'ireo hakamoana sy ny tsy fahazakana manelingelina ny fiainanao miala avy aminao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Rehefa a raharaham-barotra mitombo, dia midika fotsiny izany fa mitombo ny habeny, ny mpanjifa, sampana ary tombony ofcourse. Amin'ny maha-zanak'Andriamanitra anao, tian'Andriamanitra hanitatra ny morontsirakao ianao dia maniry anao hipoaka amin'ny lafiny rehetra. Tsy natao ho any amin'ny tokana tokana na birao iray fotsiny ianao, tsy tian'Andriamanitra hahatratra ny faran'ny tany ny orinasanao. Nanomboka ny tantsaha Isaka, saingy nitatra tany amin'ny faritra hafa, toy ny fiompiana omby sy ny fitrandrahana tsara sns .. I Abrahama dia lehilahy mpandraharaha iraisam-pirenena koa, Joba no manankarena indrindra tamin'ny fireneny tamin'ny androny. Azonao atao ny manomboka kely, saingy tsy mahazo mijanona kely ianao. Tian'Andriamanitra hitombo ianao, tiany hivelatra sy ho mialona ny tontoloo ianao. Na izany aza, raha te-hitombo amin'ny asanao ianao dia tsy maintsy mieritreritra fitomboana, tsy afaka manao fandrosoana izay tsy hitanao ianao. Andriamanitra dia nilaza tamin'i Abrahama fa tsy afaka mahazo mandeha araka izay hitan'ny masonao fotsiny ianao. Midika fotsiny izany fa mandra-pahitan'ny fitomboana ao an-tsainao dia tsy afaka miditra aminy ianao. Tsy maintsy misondrotra mitombo ao am-ponao ianao, mino azy, alohan'ny ahafahanao miaina izany amin'ny fiainanao. Hanokatra ny sainao ny vavaka ho an'ny fitomboan'ny fandraharahana ka hahita vina amin'ny dingana manaraka ny orinasanao ianao. Handre ny fijoroana ho vavolombelona momba ny fitomboan'ny orinasa amin'ny anaran'i Jesosy aho.
1. Ray ô, misaotra anao indrindra aho noho ny fanirianao lehibe indrindra ho ahy dia ny fanambinana lehibe rehetra amin'ny anaran'i Jesosy
2. Ray ô, misaotra anao tsy namela ny hadisoako hanimba ny orinasako amin'ny anaran'i Jesosy
3. Raiko ô, miditra amin'ny seza fiandriananao fahasoavana aho mba hahazo famindram-po sy fahasoavana hiaina sy hanao tsara amin'ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Ray ô, mangataka fahendrena avy any an-danitra aho rehefa manohy ny asako amin'ny anaran'i Jesosy
5. Ray ô, omeo fahendrena lehibe ho an'ny paikady aho mba hahombiazako amin'ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Ray ô, ampifandraiso amin'ny olona mety aho mba hanampy ahy hahomby amin'ny asa amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Ray ô, tariho aho ho amin'ny tontolo mety izay handoborobo ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ray ô, sokafy ny masoko, mba hahitana ny vahaolana amin'ireo olana rehetra miandry eo amin'ny orinasako amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ambarako fa hiroborobo ny asako araka ny baikon'i Isaka amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Ambarako fa tsy misy fitaovam-piadiana hanoherana ny asako izay miroborobo amin'ny anaran'i Jesosy amena
11). Ray ô, amboary ny diako amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy
12). Ray ô, ambarako ankehitriny fa satria mpiandry ahy i Jesosy dia tsy ho diso lalana intsony aho
13). Ray ô, arotsaho ny olona mandeha amin'ny fotoana mety ary amin'ny fotoana mety
14). Dada ataon'i Dada amin'ny alàlan'ny toerana mety amin'ny anaran'i Jesosy.
15). Ray ô, arotsahy ny olona mankany amin'ny olona mahitsy amin'ny anaran'i Jesosy
16). Dada ataon'i Dada amin'ny alàlan'ny asa mety, asa aman-draharaha sy / na raharaham-barotra amin'ny anaran'i Jesosy
17). Ray ô, aza tariho aho amin'ny fakàm-panahy, fa afaho amin'ny ratsy rehetra aho amin'ny anaran'i Jesosy
18). Ray ô, avelao ny teninao ho boky fitarihana voalohany ho ahy hatrizay mandroso amin'ny anaran'i Jesosy
19). Ry Fanahy Masina malala, ho mpanolotsaina lahatra ho ahy hatrany manomboka anio amin'ny anaran'i Jesosy
20). Misaotra anao Dada noho ny famalianao vavaka amin'ny anaran'i Jesosy
21). Ray ô, misaotra anao noho ny nitahiany ahy fahendrena lehibe
22). Ray ô, avelao ny fahendrenao hitarika ahy amin'ny androko hanao zavatra amin'ny anaran'i Jesosy
23). Ray ô, manorata ahy amin'ny fanahin'ny fahendrena rehefa mihazakazaka ny hazakazaka amin'ny anaran'i Jesosy aho
24). Avelao ho hita eo amin'ny asako isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy ny fahendrena
25). Ray ô, omeo fahendrena aho amin'ny fomba ifandraisako amin'ireo olona isan'andro ao amin'i Jesosy
26). Ray ô, omeo fahendrena aho raha mifandray amin'ny vadiko amin'ny anaran'i Jesosy
27). Ray ô, omeo fahendrena aho amin'ny fifandraisany amin'ireo zanako amin'ny anarana jesosy
28). Manome fahendrena ahy i Dada rehefa mifandraika amin'ny lehibeko ao amin'ny birao amin'ny anaran'i Jesosy
29). Ray ô, omeo fahendrena aho amin'ny fifandraisako amin'ireo mpanafidiko amin'ny anaran'i Jesosy
30). Ray ô, misaotra anao aho noho ny nanorenany ahy tamin'ny fahendrena avy any an-danitra tamin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratra21 Mivavaha ho an'ny ray aman-dreny
Next lahatsoratra50 Ireo toerana tokony hivavaka amin'ny fivoriana amin'ny vavaka
Entim-bavaka ho fampiroboroboana avo roa heny
Vavaka mafy ho an'ny firaisana ao amin'ny fianakaviana